Utata onesifo i-Alzheimer, kufuneka siyikhathalele njani-Hombres con Estilo | Amadoda aQinisekileyo
Ukukhathalela umzali one-Alzheimer ayisiyonto inokusichaphazela sonke, kodwa ngokuqinisekileyo inyani iwela emntwini omaziyo. Ayisiyonto iqhelekileyo njengoko besesitshilo, kodwa inokubandezeleka nakubani na kwaye inokubonakala ngathi yinto engalindelekanga kwaye ngokumangaliswa; ke, inokwenzeka kuthi sonke.
Uya kufumanisa ukuba lutshintsho olubaluleke kakhulu kuye wonke umntu, yomntu ophethwe yiyo, kunye namanye amalungu osapho aza kuba phantsi kolawulo lwabo. Umzali one-Alzheimer uya kufumanisa ukuba yinxalenye yokhathalelo lomntu kwaye uyakuqala uzive ukhathazekile xa usibona ukuba ufuna umntu omgcinayo.
1 Uqala njani ukukhathalela umzali one-Alzheimer's
2 Ngaba kubalulekile ukuqesha umkhathaleli oqeqeshiweyo?
3 Ukuba uthathe isigqibo sokuyinyamekela buqu
4 Iinkqubo zemihla ngemihla zomzali one-Alzheimer's
Uqala njani ukukhathalela umzali one-Alzheimer's
Umzali one-Alzheimer uye wangomnye umntu kwaye ifuna ukhathalelo olukhethekileyo. Ngelishwa asinakuthetha ngenkqubela phambili entshaKufana nesisombululo kumgangatho wobomi obungcono, kodwa ukwandisa ixesha lokuphila.
Isifo sakho siqhubela phambili kwaye mhlawumbi babonisa kuphela iimpawu zabo zokuqala, kodwa njengoko ixesha lihamba ukonyuka kwabo kunokunyuka. Iiseli zemithambo-luvo zengqondo ziyatshatyalaliswa kwaye ubunzima bobuchopho babo buyancipha, Ke ngoko, ukudideka okwethutyana kunye nendawo, ukulahleka kwememori kunye nokuwohloka kwengqondo okuluqilima kunye nokubonakala komntu kungabonakala.
Kancinci kancinci ukhathalelo lwakho luya kubaluleka kwaye iya kuhlala ngakumbi nangakumbi, apho kuya kubakho ubunzima obulula njengokutya, ukunxiba okanye ukuhamba. Kuxa kufuneka ucinge ngokukhangela umnakekeli okanye, ukusilela oko, ilungu losapho elithembekileyo.
Kungenzeka ukuba, ukuba uza kwenza ngaphandle komntu oza kukukhapha kwaye ukwazi ukwenza umsebenzi wakho wesikolo, kuya kufuneka ujongane nale meko ngendlela yobuqu. Kuya kufuneka wenze intshayelelo ngokusesikweni naloo mntu kunye notata wakho, kwaye uthethe ngemeko enjalo ngokufanelekileyo. Kufuneka uhambe ndichaza indawo entsha iya kuziswa ukuze ukwazi ukuyilinganisa.
Ngaba kubalulekile ukuqesha umkhathaleli oqeqeshiweyo?
Kuyacaca ukuba ukhathalelo olunokufuneka kumntu one-Alzheimer's banokuba krwada. Ngezifo eziphambili, kunokuba njalo ukuhambisa ngononophelo iiyure ezingama-24 ngosuku. Kungenxa yoko le nto kunokuba nzima kwaye ngakumbi ukuba umntu ophetheyo kufuneka asebenze.
Mhlawumbi indlela yokuqala eza engqondweni ngumba wezoqoqosho lowo. Mhlawumbi kuloo nto yinto ehleleleke kakhulu ukusukela ngelishwa Inkululeko yomthetho ayenzi lula kakhulu. Unontlalontle angakwazisa ngento onokuyiboleka, nangona okwangoku kungekho zisombululo zezoqoqosho.
Ukuthembela emntwini onokukukhathalela kwaye athembeke inokukuvumela ukuba ube nexesha elininzi lakho. Ukongeza, uya kuyikhathalela impilo yakho yengqondo kuba awunyanzelekanga ukuba ube noxanduva olukhulu kakhulu ekukhathaleleni omnye umntu. Olu hlobo loncedo luya kunceda ugcina ixesha elininzi, licacile kwaye ngaphandle koxinzelelo.
Ukuba uthathe isigqibo sokuyinyamekela buqu
Into yokuqala enokuyenza kukuba Ukuqokelela ulwazi oluninzi malunga nesifo esichaziweyo kunye nenkathalo yabo. Kukho imibutho efana ne-Alzheimer's Association kunye ne-Alzheimer's Disease Education and Reference Centre (ADEAR) eya kukunceda ulandele unyango olungcono kunye nokusombulula iingxaki zemihla ngemihla ngcono.
Joyina uluntu kunye neqela lenkxaso lukhetho oluhle kakhulu. Nanini na xa ixesha lakho livuma, kuya kufuneka ukothule iimvakalelo zakho kunye neenkxalabo kula maqela adibeneyo. Kungenxa yoko le nto kuya kufuneka ujonge umntu oza kukuxhasa ukuze ukwazi ukonwabela ixesha elincinci ozifunela lona.
Ukuba uvumelekile ukhathalelo lwangaphandle jonga awona mathuba mthwalo mibi. Awona maxesha abhetyebhetye kwaye apho ndinokusebenzisana ngokulula ngakumbi nawe, zigcinele ngokwakho. Kuya kufuneka uhlengahlengise inkqubo yakho kwiimfuno ezilungileyo kwaye ungagqithisi iintsuku.
Xa ujonga amaxesha kunye, kufuneka yenza izinto ozithandayo kwaye uzive kamnandi ngazo. Eyona nto isebenza yile kukukhumbuza ngamaxesha obuntwana kunye nokwabelana ngezinto zokuzonwabisa ezindala.
Iinkqubo zemihla ngemihla zomzali one-Alzheimer's
Misela inkqubo yemihla ngemihla, kuya kufuneka ulandele ipateni yemisebenzi efanayo yonke imihla.
Kufuneka unxibe yonke imihla kwaye oku akufuneki ukuba kube ngumsebenzi onzima. Unga makenze ngokwakhe ukuba kusemandleni akho. Uya kuthi zikunike iimpahla nganye nganye unxibe kancinci. Ngalo lonke ixesha khetha iimpahla ezintle ezinokuphathwa ngokulula, ngaphandle kwamaqhosha amaninzi okanye iiziphu.
Ishedyuli emiselweyo yokutya kosukuKubalulekile ukulandela inkqubo yesiqhelo kwaye kufuneka uyenze kwi indawo ezolileyo engenaziphazamiso. Kufuneka yiba nomonde kwaye uphephe ukungxamaNgexesha lokutya, njengoko kunokubangela ukudideka kunye noxinzelelo.
Ukuba umntu utya yedwa, yenza kube lula kuwe ukuba usebenzise izixhobo zokusika kwaye usebenzise iipleyiti ezinzulu. Iziselo, ukuba kunokwenzeka, ezinesiciko ukuze zingachithi izinto ezingamanzi kwaye zisela ngokulula, ukusetyenziswa kweendiza kuyasebenza. Kuya kufuneka ulumkele ukutya okutyayo, kuba kukho abantu abangakwaziyo ukukhathalela ukutya kwabo kwaye banokutya ngokunyanzelwa.
Ixesha lokuhlamba: inokuba lixesha lokuphumla, yiyo loo nto kufuneka uyenzile qikelela yonke into oyifunayo phambi kokucwangcisa umzuzu. Abanye abaguli ngalo mzuzu banokungonwabi ngenxa yoloyiko, kodwa kuya kufuneka uzixhase ngomonde. Ukuba ucinga igumbi lokuhlambela alisebenzi ungasebenzisa ishawa ngokukhawuleza.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Utata onesifo i-Alzheimer, kufuneka siyikhathalele njani
Wazi njani ukuba intombazana iyakuthanda